“Aniga Madaxweynaha aad baan isu garanaynaa” Ramaax | Berberanews.com
Home WARARKA “Aniga Madaxweynaha aad baan isu garanaynaa” Ramaax
Hargeysa(Berberanews)-Xoghayaha Arrimaha Gudaha UCID, Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax), oo ka jawaabay su’aal laga weydiiyay inuu xidhiidh la leeyahay Madaxweynaha Somaliland iyo in kale, ama u janjeedho xaggiisa, ayaa beeniyay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay.
Mr Ramaax wuxu sheegay inay madacweynaha iska soo horjeedaan dhanka siyaasadda. Isagoo arrintaa ka hadlayana wuxuu yidhi “Aniga Madaxweynaha aad baan isu garanaynaa, waana Madaxweynahaygii, markaa xumaan iyo fogaansho ma laha’ siyasadana waan ku wada jirnaa waana kaga soo horjeeda, siyaasadda hoggaaminta inta kaga soo horjeed ee leh ‘waxbaa qaldan’ ayaan ahay.”
Mr Ramaax oo shir jaraaid ku qabtay Magaalada Burco, ayaa hambalyeeyay magacaabistii Hay’adda Caymiska Qaranka “Waxaan ku hambalyaynayaa Madaxweynaha Hay’adda Caymiska ee uu magacaabay oo runtii ahayd wax aad iyo aad loogu baahnaa, horena in badan aan ka hadalnay.”.
maxamuud cali saleebaan Ramaax
Previous articleMarwo Shukri Xariir oo Hargeysa ku geeriyootay iyo madaxweynaha oo Tacsiyeeyay
Next articleXogta Turkiga oo la soo wareegay shixnadii 2aad ee gantaalaha S-400
Somalia: Alshabaab oo qarax ay ku fuliyen muqdisho ku laayay dad rayid u badan